Madaxweyne Axmed Qoorqoor iyo Beesha Caalamka oo ka wada hadlay Doorashada – HORUFADHI MEDIA |
Madaxweyne Axmed Qoorqoor iyo Beesha Caalamka oo ka wada hadlay Doorashada
Madaxweynaha dowlad Goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye ( Qoor Qoor) ayaa wada-hadallo dhanka Khadka Internetka ee Aalada Zoomka waxaa uu kula yeeshay qaar kamid ah Wakiilada Beesha Caalamka, iyaga oo ka wada hadlay arrimaha doorashooyinka dalka.
Madaxweynah ayaa Wakiillo ka socda Qaramada Midoobay, UK, USA iyo Midowga Yurub kala hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin doorashooyinka amniga, qoondada haweenka iyo taageerada miisaaniyada.
” Waxaan u xaqiijinnay inaan soo gebagebeyneyno doorashada ka hor dhammaadka 2021-ka ayuu yiri” Madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor oo ka hadlaayay kulanka uu la qaatay Wakiilada Caalamiga.
Wakiilada Beesha Caalamka ayaa wada dadaalo ku adan doorashada dalka iyo sidii Madaxda Soomaalida ay sanadkaan 2021 u soo geba-gabeyn lahaayeen doorashada Soomaaliya, iyagoona dalabyo kala duwan u diray Madaxda maamulada…
Doorashada Golaha Shacabka Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa waxaa lagu wadaa in maalmaha soo socda ay ka bilaabato Maamul Goboleedyada dalka, waxaana Maamulka ugu horreeya ee bilaaba doorashada Golaha uu noqon doonaa Galmudug.
Wararkii ugu dambeeyay Dil ka dhacay xaafad ka tirsan Magaalada Muqdisho, xili loo dhex..
Qoorqoor oo kulan la yeeshay Xubno ka socday Beesha Caalamka